भूकम्प पीडितकै अगुवाईमा एकीकृत बस्ती निर्माण - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
बैशाख १८, २०७५ 1064 ऊर्जा खबर/रामेछाप
भूकम्पपीडितकै अगुवाईमा जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका–५ गुन्सालमा एकीकृत वस्ती निर्माण हुने भएको छ । स्थानीय भूकम्प पीडितले बस्ती निर्माणमा सक्रियता बढाएका छन् ।
भूकम्प गएको ३ वर्षपछि स्थानीयले नै ३५ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न लागेका छन् । भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका घर निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अपनाएका छन् । स्थानीयले सामुहिकरूपमा जग्गा प्लानिङसहित आधुनिक र सुविधा सम्पन्न घर निर्माण गर्न लागेको जनाएका छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराएको ३ लाख रुपैयाँ पनि स्थानीयले एकीकृत बस्ती निर्माणमा खर्च गर्ने भएका छन् । सेती देवी जनजागृति युवा समाजद्धारा निर्माण गरिने बस्तीका लागि गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको छ ।
एकीकृत बस्तीमा गर्दा ढल, खानेपानी र शौचालय निर्माणको काममा सहयोग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह मोक्तानले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा बस्तीका लागि पनि रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गाउँपालिकाले एकीकृत वस्तीमा वडाको नाममा जग्गा लिएर सामुहिक भवन निर्माण गर्ने समेत जनाइएको छ ।
एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने गाउँपालिका–५ गुन्सालका वडा अध्यक्ष गंगाबहादुर तामाङले बताए । २३ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन बस्ती वालवालिका र अपाङगमैत्री हुने बताइएको छ ।
बस्तीका सबै घर आरसिसी ढलान गरेर निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र नै नमुना बस्ती निर्माण हुनु खुसीको कुरा हो ।’ आफूले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सक्दो सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा घर निर्माण गर्न साढे ९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका आधारमा ३५ घर निर्माण गर्न ३ करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ ।